Casa Nerina - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFranziska & Nerina
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uFranziska & Nerina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Usapho lwethu olunezilwanyana luhlala kule ndlu yasefama yaseTuscan esembindini weToscany, indawo ye-perfekt yokutyelela zonke izixeko zenkcubeko kunye nokufikelela kwisanti emangalisayo-kunye namanxweme amatye. Indlu yasefama enamagumbi ama-3 ijikelezwe yigadi eneempawu zepayini kunye nemithi yemisipres. Indawo ephangaleleyo yomgangatho ophantsi oyi-90m2 ibizwa ngokuba yiNerina. Ngesicelo siyavuya ukunika iindwendwe zethu iingcebiso zokufumana ummandla wethu ngesiNgesi, isifrentshi, isijamani okanye isiTaliyane.
Indawo esiyinika iindwendwe zethu inekhitshi elikhulu/igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nokufikelela egadini. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo: Umatshini wokuhlamba izitya, ifriji enefriji, umpheki wegesi, i-oveni yombane, umatshini wekofu, iketile, itoaster kunye nesatellit TV. Ikhitshi likhokelela kwigumbi lokuhlala elibanzi elinebhedi yesofa ekhululekileyo kunye neTV yesathelayithi. Igumbi lokuhlambela elikhulu neliqaqambileyo lineesinki ezimbini, ibhafu enkulu eneshawa kunye nebidet. Ipaseji enethala leencwadi ikhokelela kumagumbi okulala amabini apholileyo.
Ngexesha lasebusika kukho ii-radiator kwigumbi,
umrhumo wokufudumeza uya kusetyenziswa ekupheleni kohambo lwakho.
Umgangatho ophantsi wendlu esiyinika undwendwe lwethu imalunga ne-90 square metres, isandula ukulungiswa kwaye yahlulwe ngokupheleleyo. Iindwendwe zethu zingonwabela ukuthula kunye nemimangaliso yendalo efana nokutshona kwelanga kunye nesibhakabhaka esineenkwenkwezi, zombini ukusuka kwiindawo ezininzi ezinezixhobo ezintle egadini nakwihlathi lepine.
Iivenkile, iivenkile ezinkulu, iibhanki, iiofisi zeposi, iiseli zewayini kunye neeresityu zikumgama wemizuzu emihlanu ukusuka kwindlu leyo. Isikhululo sikaloliwe sasePontedera kunye nesikhululo seenqwelomoya sasePisa sikule ndawo.
Le yindawo efanelekileyo kwabo bathanda indalo, ukutya okulungileyo kunye newayini elungileyo kwaye banqwenela ukutyelela iindawo ezibaluleke kakhulu zenkcubeko ezifana nePisa, Lajatico, Firenze, S.Gimignano, Volterra, Lucca kunye neSiena. Zonke ezi zixeko ziphakathi kwe-15 kunye ne-70 km. Iidolophu ekuchithelwa kuzo iiholide ezidumileyo njengeViareggio, iLivorno, iCastiglioncello, isiqithi saseGiglio kunye nesiqithi sase-Elba zifikeleleka ngokulula.
Umbuki zindwendwe ngu- Franziska & Nerina
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Terricciola